Ukuqonda Amandla Ommeli | Inkampani Yomthetho Eklonyelisiwe
Inhloso Yamandla Ommeli ukwenza ukumelwa komuntu omabele ukwenza imisebenzi yakho kube semthethweni futhi kube semthethweni. Uma ufuna ukucela othile ukuthi akumelele noma akumelele ezindabeni zomthetho eziyimfihlo njengokuthengiselana kwebhizinisi noma ezinye izindaba zezomthetho, uzodinga incwadi evela kummeli ukuze ugunyaze omele futhi lokhu kubizwa ngokuthi Amandla Ommeli (POA). Kunezinhlobo Zamandla Ommeli okudingeka uzazi ngaphambi kokwenza lokho. Nokho, inkantolo ayibandakanyeki naMandla Ommeli ngaphandle uma esimweni sokungakwazi komuntu wokuqala ukwenza izinqumo. Ngaphambi kokukhipha I-Power of Attorney, kufanele ufundiswe ukuthi isebenza kanjani kanye nezinhlobo zayo.
Iyini Amandla Ommeli?
“I-Power of Attorney” yidokhumenti ebhaliwe esetshenziswa lapho ucela othile ukuthi akumele ekwenziweni kwakho kwezomthetho, kwezezimali, noma kwempahla. Nokho, Amandla Obumeli angase abe sesimweni esingokomthetho kodwa angakabi yifomu lenkantolo. Uma othile engakwazi ukuzithathela izinqumo (isb., equlekile, engakwazi ukusebenza kahle ngokwengqondo, njll.) futhi edinga ummeleli ukuze kuthathwe izinqumo, inkantolo ingase ibambe iqhaza ukuze ikhiphe umyalo wokuba uMnakekeli osemthethweni noma I-Conservatorship yomuntu ozokwenza lokho. amelwe futhi.
Yini ongayenza ngamandla ommeli?
Amandla ommeli ahlinzeka igunya elingokomthetho kummeli ukuze abhekane nezinkampani zangaphandle njengamabhange noma umkhandlu wendawo. Amandla athile ommeli aphinde anikeze ummeli igunya elingokomthetho lokwenza izinqumo egameni lomunye umuntu, njengokuthi kufanele ahlale kuphi noma kufanele abonane nodokotela.
Ayini amandla ommeli, futhi kungani uwadinga?
Ubani Odinga Amandla Aqinile Ommeli? Amandla ommeli adingwa yinoma yimuphi umuntu ofisa ukugunyaza omunye umuntu ukuthi enze imisebenzi ethile yezomthetho egameni lakhe (noma i-POA). Ifomu lamandla ommeli lingadlulisela igunya komunye umuntu ukuze aphathe izinkinga zezezimali, enze izinqumo zokwelashwa, noma anakekele izingane zakho.
Izinhlobo Zamandla Abameli
Amandla Ajwayelekile Ommeli
Lolu hlobo olwezindaba ezijwayelekile ezinobubanzi obunganqunyelwe kanye nobude bemvume yokumela uthishomkhulu ukuthi abambe iqhaza ekuhwebeni okuhlanganisa nezindaba zezezimali kuze kube uthishanhloko esho njalo. Ngamanye amazwi, i-A general power of attorney (GPoA) iyithuluzi elisemthethweni eligunyaza umuntu oyedwa (okubhekiselwa kuye njenge-ejenti) ukuthi amelele omunye (uthishanhloko). Uthishanhloko unikeze lesi sibopho ku-ejenti ngoba akakwazi ukuzikhethela yena. Le GPoA ivamile ngokwemvelo, futhi i-ejenti izonikwa amandla okwenza izinqumo ezingokomthetho, zezokwelapha, zezezimali, nezebhizinisi (kodwa hhayi indawo ethengiswayo). Ayibuyiseleki emuva, futhi uthishanhloko kufanele avume ukugunyaza okwenziwa yi-GPoA.
Amandla Okucacile Ommeli
Amandla athile ommeli avumela oqokelwe ukumela abanye ukuthi enze umsebenzi othile owodwa kathishanhloko. Ukusetshenziswa okuvame kakhulu kwamandla athile ommeli kuwukuhlola isiginesha ye-akhawunti nokusayina inkontileka. Ukuthengiselana kwezindlu kuphela okungabhaliswa kuhulumeni futhi okunye ukuthengiselana akudingekile ukuthi kuqoshwe. Ngamanye amazwi, I-Special Power of Attorney (SpoA) iyithuluzi elisemthethweni eligunyaza umuntu oyedwa (okubhekiselwa kuye njenge-ejenti) ukuthi enze okuthile egameni lomunye (uthishanhloko). Uthishanhloko unikeze lesi sibopho ku-ejenti ngoba akakwazi ukuzikhethela yena. Le SpoA iqondene nempahla ethile. Ayibuyiseleki emuva, futhi uthishanhloko kufanele avume ukuqinisekisa okwenziwa yi-SPoA. Uma ungakwazi ukuzenzela izinqumo, uzosebenzisa i-POA. Lokhu kungase kube ngenxa yokukhathazeka kwezempilo noma iqiniso lokuthi awukwazi, kodwa kufanele, ube khona ngokomzimba ukuze ukwenze.
Iyini Amandla Ahlala Njalo Ommeli?
Amandla aqinile ommeli (noma i-POA) asetshenziswa ekuhlelweni kwezindlu futhi kubhekiselwa kukho njengesikhathi esingenamkhawulo samandla ommeli. Ukuqina kwe-POA kuqala lapho unikeza isiginesha yakho namandla akho okwenza izinqumo komunye umuntu obizwa ngokuthi ummeleli wakho. Unika ummeleli wakho amandla aphelele okuba nguwe ekwenziweni okuqondile ovume ukumdlulisela kuye, isivumelwano sisebenza ngenkontileka noma ngaphandle kwenkontileka inqobo nje uma usekhona Ummeli wakho.
Kalula nje, amandla aqinile ommeli yilawo avame ukuqhubeka nokusebenza kuze kube sekufeni kukathishanhloko noma kuze kube yilapho ithuluzi lihoxiswa. Amandla ommeli aqinile, ubude besikhathi okufanele kushiwo ngokucacile, buhlala busebenza ngisho noma uthishanhloko engakwazi ukwenza izinqumo zomuntu siqu ngenxa yokungakwazi ukusebenza. Ngakolunye uhlangothi, amandla ommeli “okungahlali isikhathi eside”—okungenakho ukuhlinzekwa kokuqina—aphelelwa yisikhathi ngenxa yokwehluleka kukathishanhloko. Imithetho elawula amandla ommeli iyahluka kuye ngesifunda.
Imicabango emi-2 ku- "Ukuqonda Amandla Ommeli"
11/14/2015 ngo-9:10 AM
Ngisayina Amandla Ommeli Omkhulu kanye nemibuzo yami,
I-1) kuzodingeka ngiye ejele noma ngibhekane nemithetho yomthetho kahulumeni wase-UAE uma inhloko ibhekene nanoma yiziphi amacala avela kumaphoyisa e-dubai noma izinkantolo ngokukhethekile lapho umuntu oyinhloko engekho e-UAE?
I-2) isignesha yami yomzimba idinga ephepheni elifakiwe leGeneral Power of Attorney?
I-3) yikuphi ukufaneleka kwalesi sivumelwano ngokuya kwesikhathi?
I-4) ngesikhathi sokukhansela amandla jikelele ommeli, inhloko-dolobha kumele ifune ku-UAE?
sicela unginike i-repaly ASAP.
11/17/2015 ngo-2:40 AM
Sawubona, Sicela ushayele i-055 801 8669 futhi usivakashele ngemininingwane.